Daqiiqada Dahaarka leh ee Birta: Maxay Tahay, Sida Loo Adeegsado, Iyo Midka La Doorto | Qalab bilaash ah
Birta qallajisa daasadda: waa maxay, sida loo isticmaalo, iyo midkee la doortaa
Isaac | 20/09/2021 09:00 | Qaybaha elektarooniga ah
Un daasadda birta qallajinaysa ama bamka daasadda ah Waa aalad si weyn u adeegsata elektiroonigga, maadaama ay u oggolaanayso in laga saaro alxanka daasadda ah. Taasi waa, waxay noqon doontaa ka soo horjeedda daasadda birta lagu iibiyo. Iyo, inkasta oo ka qaadista alxanka sidoo kale lagu samayn karo siyaabo kale oo ka sii raqiisan, qalabkan waxaad u samayn doontaa si hufan oo dhaqso leh.
Sidaas ayaad wax badan uga ogaan kartaa arrintan qalabka korontada, maqaalkan waxaad ku arki doontaa macluumaad badan oo cad si aad u doorato midka ugu habboon shaqadaada.
1 Waa maxay birta qallajisa daasadda?
1.1 Sida loo isticmaalo birta baaba'aysa
2 Talooyinka Tin Desolder
Waa maxay birta qallajisa daasadda?
Un daasadda birta qallajinaysa Waa qalab taageero inta lagu jiro habka alxanka. Haddii qayb alxanka si xun loo meeleeyay, ama alxanka uusan ahayn mid tayo leh oo la go'aamiyay in laga bilaabo meel xoq si loo saxo, markaas qalabkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad si fudud uga saarto alxanka.
Birta wax lagu iibiyo waxay aad ugu egtahay qalin ama daasadda birta lagu iibiyo caadi ah. Waad ku mahadsan tahay caajiskeeda, waxay kuu oggolaan doontaa inaad tirtirto dhibcaha alxanka xitaa meelaha yaryar.
Sida loo isticmaalo birta baaba'aysa
Isticmaalka daasad birta qallajinaysa Aad bay u sahlan tahay, waa inaad raacdaa tillaabooyin aasaasi ah oo taxane ah si aad u awooddo inaad ka saarto alxanka daasadda ah. Waxay asal ahaan ka kooban yihiin:
Ku xidh birta wax lagu iibiyo oo sug inta ay ka gaadhayso heerkulka ugu sarreeya, sidaad adigu u ahaan lahayd alxanka dhaqanka.
Waxa ku xiga waa in caarada kulul la gashaa alxanka si loo tirtiro oo la sugo inay dhalaasho.
Marka taas la sameeyo, waxaad ka saari kartaa daasadda birta qallajisa. Markaad haysato bamka nuugista, waxay kaa caawin doontaa inaad nuugto daasaddii la shubay si aad uga tagto curiyaha oo nadiif ah.
Markaad samayso, waad tirtiri kartaa alaabtii la nuugay markay mar labaad adkaato ...
Talooyinka Tin Desolder
Haddii aad ku fikiraysid inaad soo gadatid birta birta qallajisa, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah kuwan moodooyinka lagu taliyay:
Tin Desoldering King oo leh bamka soo nuugista iyo mesh qalalan ayaa ka mid ah.
24 xirmo gabal ah ee alxanka: leh birta wax lagu iibiyo, birta qallajisa, multimeter, tweezers, qalfoofka, talooyinka fur, iwm.
Dhoobada qallalan leh ballaadh 1mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 3.5mm, dhererka 1,5m.
Qasacadda birta ee birta qallajisa oo leh nuugid raqiis ah oo bilowga ah.
SIQUK 7 gogo '.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Qaybaha elektarooniga ah » Birta qallajisa daasadda: waa maxay, sida loo isticmaalo, iyo midkee la doortaa
Faraday joogto ah: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato khidmadda korontada